मसीही विश्वास गर्न आउँछ गर्ने व्यक्ति, सुसमाचार सबै विचित्रताहरू को पहिलो - यो के हो? बाइबल वा एकल पवित्र पाठ भाग? सामान्य मा, प्रश्न पूजाहारीहरू उत्तेजित सुसमाचार, विषयमा र केवल साधारण मसीहीहरूको मन उतेजित गर्नु, तर पनि। का बाहिर आंकडा प्रयास गरौं सुसमाचार के। यो भविष्यमा त्रुटिहरू र धर्मशास्त्रको गलतफहमीले जोगिन मदत गर्नेछ।
धेरै स्रोतहरु सुसमाचारका विभिन्न तरिकामा व्याख्या र सुसमाचारको द्वारा चाहनुभएको छ के को प्रश्न, फरक जवाफ दिइन्छ।
त्यसैले सुसमाचार ख्रीष्टको जीवन र कामहरू बारे प्रारम्भिक मसीही लेखन छ, यसो। पारंपरिक, सुसमाचारको प्रमाणिक र apocryphal भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। मानिसहरू प्रमाणिक सुसमाचारका कुरा गर्दा, तिनीहरूले चर्च द्वारा पहिचान र मा शामिल छ मतलब नयाँ नियममा। आफ्नो atvorstvo प्रेरितहरूलाई गर्न श्रेय र केरकार छैन। यी लेखोटहरू - मसीही पंथ जग। मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्ना - कुल त्यहाँ चार प्रमाणिक सुसमाचारका छन्। सामान्य मामलामा, लूका, मार्क सुसमाचारको र मत्ती प्रत्येक अन्य सहमत र Synoptic भनिन्छ (शब्द सार देखि - सह-प्रक्रिया)। चौथो धर्मशास्त्रको, यूहन्नाको सुसमाचारको अघिल्लो तीन देखि धेरै फरक छ। नयाँ नियममा पहिलो चार पुस्तकहरू छ - तर सबैतिर यो सुसमाचारको, वास्तवमा भन्ने संकेत गर्छ।
बाइबल र सुसमाचारको - पर्यायवाची वा छैनन्
बाइबल र पर्यायवाची रूपमा सुसमाचारको गलत अर्थ लगाउनु।
सुसमाचार - कि सबै भन्दा राम्रो दृष्टिकोण, सद्गुण accommodates र ख्रीष्टियन postulates, नयाँ करारका भाग हो। बारी मा, बाइबल लागि अक्सर छैन कि अन्य, पुरानो नियमका रूपमा मतलब। नयाँ र पुरानो Testaments प्रत्येक अन्य संग नजिक जडान मा प्रस्तुत भन्ने तथ्यलाई बावजुद उत्तरार्द्ध एक हिब्रू धर्मशास्त्रको छ। तसर्थ, अभिव्यक्ति, "बाइबल र सुसमाचार" ठ्याक्कै अर्थ मा पुरानो नियमका र नयाँ नियमका। पवित्र सुसमाचारको यसरी साँच्चै narrative (narrative) र homiletic तत्व जडान जुन प्रारम्भिक मसीही लेखन, छलफल।
सुरुमा विभिन्न सुसमाचार एकदम सबै 1st शताब्दीको दोस्रो आधा सेट किनभने अप, प्रत्येक अन्य काट्न, कि येशूको क्रूसको मा ससर्त छ। जो नयाँ नियममा आए जो सुसमाचार, सिर्जना लेखक फरक मसीही समुदायहरूलाई belonged किनभने यस अनौठो, केही छ। बिस्तारै, चार सुसमाचारका जो थप वा कम दोश्रो र मसीही dogma 4-5 शताब्दीमा गर्न ustoyavschimisya संग coincided, चयन गरिएको थियो। केवल Canon समावेश थिए पहिलो तीन पदहरू, प्रत्येक अन्य संग येशू र आफ्नो जीवन prpovedey मुद्दा मा एकै समयमा पर्नु।
यस सुसमाचारका पाठ मिल्दोजुल्दो र विश्लेषण को लेखोटहरू
(% अलि बढी 40 भन्दा - - लूका सुसमाचारको मा, लगभग 60%, तुलना लागि मत्ती मिल्दो प्रतिशत मा) विद्वान र अनुसन्धानकर्ताहरूले मार्क सुसमाचारको जो अन्य दुई धर्मशास्त्रमा हुन्छ सामाग्री, को 90% भन्दा समावेश अनुमान।
यो हामी यो एक सानो पहिले लेखिएको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं, र सुसमाचारको बाँकी बस उहाँलाई भरोसा। वैज्ञानिकहरू पनि अगाडि केही सामान्य स्रोत, येशूको कुराकानी को, उदाहरणका लागि सारांश रेकर्ड थियो कि सिद्धान्त राख्नु छ। लिखित तिनीहरूलाई घनिष्ठ इंजीलवादी मार्क आए। यो दिन सुसमाचार ग्रीक मा आए, तर यो येशूले तिनीहरूको प्रवचन मा भाषा प्रयोग गरेनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तथ्यलाई पश्चिम ग्रीक छैन मिश्रको यहूदीहरूको रूपमा, मान्छे को जनता बीच परिसंचरण थियो भन्ने छ। वैज्ञानिकहरु बीच एकदम लामो समय, यो राय को सुसमाचारका को मूलहरू अरमाइक लेखिएको थियो कि प्रबल। पहिलो विश्व युद्ध को समयमा, तथाकथित बाइबल विद्वान एक "उल्टो" अरमाइक को aphorisms मा धर्मशास्त्रको अनुवाद गर्छन्। शोधकर्ताओं अनुसार, परिणाम सबैले हैरानी। ग्रीक पाठ rameyskom मा एक discordant ताल जस्तै सुनिन्छ भन्ने तथ्यलाई राइम, alliteration, assonance र स्पष्ट, सुखद ताल संग कविता वचनहरू जस्तै सुनिन्थ्यो। केही अवस्थामा यो बेला पाठ काम ग्रीक मा अनुवादकहरू अनदेखी शब्दहरू देखिने प्ले भयो। मत्ती सुसमाचारको विचार, वैज्ञानिकहरूले यसलाई मूल हिब्रू लिपिबद्ध थियो भन्ने तथ्यलाई को प्रत्यक्ष प्रमाण पाएका छन्।
यो, बारी मा, त्यो समय को यहूदीहरूको जीवनमा हिब्रू को भूमिका एकदम आंका भन्ने तथ्यलाई लागि अंक। एसएस अनुसार क्रिश्चियन साहित्य, ग्रीक र अरमाइक-यहूदी - Averintsev पूर्ण बिभिन्न भाषा प्रणाली को कगार मा उत्पत्ति। यो फरक भाषा र stylistic दुनिया छ। सुसमाचार - यो अनुष्ठान पर्छ कि एक पाठ। उहाँले memorizing र समझ पाठ मा, बरु भर्खरै पढेर भन्दा सुझाव।
सुसमाचार ईश्वरीय र मानव natures पूर्णतामा embodies येशूलाई, को व्यक्ति वरिपरि केन्द्रित। मानिस र परमेश्वरको पुत्रको छोरा - - ख्रीष्टको Hypostasis सुसमाचारको देखा सँगसँगै छन्, तर प्रत्येक अन्य संग मर्ज बिना। इंजीलवादी यूहन्ना, येशूको ईश्वरीय स्वभावको बढी ध्यान दिन्छिन् गर्दा पहिलो तीन प्रचारकहरू - आफ्नो मानव प्रकृति, एक शानदार प्रतिभा प्रचारक। येशूको एक छवि बनाउन, को प्रचारकहरू प्रत्येक येशू र उहाँको काम को कथा को आफ्नो अनुपात र उहाँलाई समाचार पाउन खोजे। प्राचीन नयाँ नियममा दोस्रो राखिएको जो मार्क सुसमाचारको, विश्वास गरे।
स्पा स्याउ, मह, नट - लोकप्रिय वा मसीही बिदा?
अगस्ट मा स्थान: को अर्थोडक्स पात्रो
"प्रेषितहरूको प्रेरित": पुस्तकको व्याख्या
यूजीन: दिन चर्च पात्रोमा स्वर्गदूत
Bogolyubskii गिरजाघर (Michurinsk): विवरण, इतिहास, ठेगाना
गुमाउन सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका वजन - यो आत्मसंयम छ
समीक्षा र औद्योगिक वाशिंग मिसिन को दर्जा। लाँड्री लागि औद्योगिक वाशिंग मिसिन के हुन्
नयाँ नवजातको नाकहरू कसरी काट्न: सिफारिसहरू र विशेषताहरू
अफ्रिकी मास्क र यसको जादुई महत्त्व
म एउटा सानो बच्चा किन भएको थियो? सपना व्याख्या थाह
दिमित्री BELKIN (Orekhovskaya OPG): जीवनी, फोटो, परीक्षण र सजाय
फूल clerodendrum: घर, प्रजनन, फोटो मा हेरविचार
आकर्षित प्रेम - यो जस्तै?
Afghan मुसा - तथ्य वा मिथ्या?
एक-26 - एक सैन्य परिवहन विमान: वर्णन, विनिर्देशों, सञ्चालन निर्देशन